Anidaso Ankasa Wɔ Hɔ Ma W’adɔfo a Wɔawuwu No - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
Anidaso Ankasa Wɔ Hɔ Ma W’adɔfo a Wɔawuwu No
Yɛyɛ dɛn hu sɛ owusɔre no bɛba ankasa?
Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Yehowa ani gye ho sɛ obenyan awufo?
Henanom na wobenyan wɔn?
FA NO sɛ ɔtamfo tirimɔdenfo bi repam wo. Ne ho yɛ den yiye, na ne ho yɛ hare sen wo nso. Wunim sɛ onni mmɔborohunu efisɛ wakunkum wo nnamfo bi ma woahu pɛn. Ɛmfa ho mmɔden biara a wobɔ sɛ wubeguan afi n’anim no, ɔkɔ so bɛn wo ara. Ɛte sɛ nea anidaso biara nni hɔ. Nanso, mpofirim ara ogyefo bi begyina w’akyi. Ne ho yɛ den koraa sen wo tamfo no, na ɔhyɛ wo bɔ sɛ ɔbɛboa wo. Hwɛ abotɔyam a ɛbɛma woanya!
2 Ɔtamfo bi a ɔte saa taa wo so ankasa wɔ ɔkwan bi so. Ɔtamfo bi taa yɛn nyinaa so. Sɛnea yehui wɔ ti a edi eyi anim mu no, Bible frɛ owu ɔtamfo. Yɛn mu biara nni hɔ a obetumi aguan afi n’anim anaasɛ wakwati no. Yɛn mu dodow no ara ahu sɛ ɔtamfo yi afa yɛn adɔfo pɛn. Nanso, Yehowa ho yɛ den koraa sen owu. Yehowa ne Ogyefo a ɔwɔ ɔdɔ a wada ne ho adi dedaw sɛ obetumi adi ɔtamfo yi so nkonim no. Na ɔhyɛ bɔ sɛ ɔbɛsɛe ɔtamfo yi a ɔne owu no korakora. Bible kyerɛkyerɛ sɛ: “Ɔtamfo a odi akyiri a obetu no agu no ne owu.” (1 Korintofo 15:26) Ɛyɛ asɛmpa ankasa!
3 Ma yensusuw sɛnea sɛ ɔtamfo yi fa yɛn dɔfo bi a ɛka yɛn no ho kakra. Eyi a yɛbɛyɛ no bɛboa yɛn ma yɛate biribi a ɛbɛma yɛn ani agye ase. Wunim, Yehowa hyɛ bɔ sɛ awufo bɛtra ase bio. (Yesaia 26:19) Wɔbɛsan de wɔn aba nkwa mu. Ɛno ne owusɔre ho anidaso no.
BERE A ƆDƆFO BI AWU
4 So wo dɔfo bi awu pɛn? Sɛ ɛba saa a, ɛyɛ sɛ nea yentumi nnyina ɛyaw ne awerɛhow no ano koraa. Wɔ mmere a ɛte saa mu no, ɛsɛ sɛ yɛkɔ Onyankopɔn Asɛm mu kɔhwehwɛ awerɛkyekye. (2 Korintofo 1:3, 4) Bible boa yɛn ma yɛte sɛnea Yehowa ne Yesu te nka wɔ owu ho no ase. Yesu a ɔdaa N’agya suban adi pɛpɛɛpɛ no nim sɛnea sɛ obi ho nipa wu a ɛyɛ yaw fa. (Yohane 14:9) Bere a na Yesu wɔ Yerusalem no, na ɔtaa kɔsra Lasaro ne ne nuabeanom, Maria ne Marta, a na wɔte Betania a na ɛbɛn hɔ no. Wɔbɛyɛɛ ne nnamfo paa. Bible ka sɛ: “Na Yesu dɔ Marta ne ne nuabea ne Lasaro.” (Yohane 11:5) Nanso, sɛnea yehui wɔ ti a edi eyi anim mu no, Lasaro wui.
5 Bere a Yesu adamfo no wui no ɔtee nka dɛn? Kyerɛwsɛm no ka sɛ Yesu ne Lasaro abusuafo ne wɔn nnamfonom boom dii owu yi ho awerɛhow. Bere a Yesu huu abusuafo no, ne werɛ howee kɛse. “Osii apini na ne ho yeraw no.” Afei, kyerɛwsɛm no ka sɛ, “Nusu guu Yesu.” (Yohane 11:33, 35) So awerɛhow a Yesu dii no kyerɛ sɛ na onni anidaso? Ɛnkyerɛ saa koraa. Nokwarem no, na Yesu nim sɛ anigyesɛm bi rebesi. (Yohane 11:3, 4) Nanso, ɛyaw ne awerɛhow a owu de ba no kaa no.
6 Awerɛhow a Yesu dii no hyɛ yɛn nkuran ɔkwan bi so. Ɛkyerɛ yɛn sɛ Yesu ne N’agya, Yehowa, ani nnye owu ho. Nanso, Yehowa Nyankopɔn betumi ne saa tamfo no ako adi no so nkonim! Ma yɛnhwɛ nea Onyankopɔn maa Yesu tumi ma ɔyɛe.
“LASARO, FI BRA!”
7 Ná wɔasie Lasaro wɔ ɔboda bi mu, na Yesu kae sɛ wonyi ɔbo a ɛda ɔboda no ano no. Marta kae sɛ wonnyae efisɛ na adi nnannan, na na ɛbɛyɛ sɛ Lasaro funu no afi ase reporɔw. (Yohane 11:39) Wɔ nnipa ani so no, na anidaso biara nni hɔ.
8 Woyii ɔbo no fii hɔ, na Yesu de nne kɛse teɛɛm sɛ: “Lasaro, fi bra!” Dɛn na esii? “Ɔbarima a wawu no pue bae.” (Yohane 11:43, 44) So wubetumi de w’adwene abu anigye a nnipa a na wɔwɔ hɔ no nyae? Sɛ́ ebia na Lasaro yɛ wɔn nuabarima, wɔn busuani, wɔn adamfo, anaa ofipamfo no, na wonim sɛ wawu. Nanso, ɔbarima no, wɔn dɔfo no ara na na wasɔre gyina wɔn nkyɛn yi. Ɛbɛyɛ sɛ na ɛyɛ den sɛ wobegye adi. Akyinnye biara nni ho sɛ nnipa pii de anigye yɛɛ Lasaro atuu. Owu so nkonimdi bɛn ara ni!
Lasaro wusɔre no de anigye kɛse bae.—Yohane 11:38-44
9 Yesu anka sɛ ɔno ankasa na na ɔrebɛyɛ anwonwade a ɛyɛ ahodwiriw yi. Wɔ mpae a Yesu bɔe ansa na ɔrefrɛ Lasaro sɛ omfi mmra mu no, ɔma ɛdaa adi pefee sɛ Yehowa ne owusɔre no Fibea. (Yohane 11:41, 42) Ná ɛnyɛ eyi nko ne bere a Yehowa de ne tumi adi dwuma wɔ saa kwan yi so. Lasaro wusɔre no yɛ anwonwade a ɛte saa akron a wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Onyankopɔn Asɛm mu no mu biako pɛ.* Ɛyɛ anigye sɛ yɛbɛkenkan saa kyerɛwtohɔ yi na yɛasua ho ade. Ɛkyerɛ yɛn sɛ Onyankopɔn nhwɛ nnipa anim, efisɛ nnipa a wonyanee wɔn no bi yɛ mmofra ne mpanyin, mmarima ne mmea, Israelfo ne wɔn a wɔnyɛ Israelfo. Na hwɛ anigyesɛm a wɔaka ho asɛm wɔ saa kyerɛw nsɛm yi mu! Sɛ nhwɛso no, bere a Yesu nyanee abeawa bi fii awufo mu no, n’awofo “ani gyei kɛse.” (Marko 5:42) Yiw, Yehowa ma wonyaa biribi a wogyinaa so maa wɔn ani gyei a na wɔn werɛ remfi da.
10 Nokwarem no, wɔn a Yesu nyanee wɔn no san wuwui. So eyi kyerɛ sɛ na mfaso nni so sɛ wonyanee wɔn? Ɛnte saa koraa. Saa Bible mu nsɛm yi si nokwasɛm ahorow bi a ɛho hia so dua, na ɛma yenya anidaso.
NEA YESUA FI OWUSƆRE HO KYERƐWTOHƆ NO MU
Elia nyanee okunafo bi ba.—1 Ahene 17:17-24
11 Bible kyerɛkyerɛ sɛ awufo ‘nnim biribiara.’ Wɔnte ase, na wonni baabiara. Lasaro asɛm no si eyi so dua. Bere a Lasaro nyanee no, so ɔkaa nneɛma bi a ohui wɔ ɔsoro ho asɛm kyerɛɛ nkurɔfo de gyee wɔn ani? Anaasɛ ɔkaa hellgya bi a ɛredɛw ho asɛm de yii wɔn hu? Dabi. Bible nka sɛ Lasaro kekaa nsɛm bi a ɛte saa. Ná ‘onnim biribiara’ wɔ nnannan a na wawu no mu. (Ɔsɛnkafo 9:5) Ná Lasaro awu ankasa.—Yohane 11:11.
12 Lasaro ho kyerɛwtohɔ no nso kyerɛkyerɛ yɛn sɛ owusɔre no yɛ nokwasɛm, na ɛnyɛ anansesɛm bi. Yesu nyanee Lasaro wɔ nnipa pii anim. Nyamesom akannifo a na wɔmpɛ Yesu asɛm mpo annye anwonwade yi ho kyim. Mmom no wɔkae sɛ: “Ɛdɛn na yɛnyɛ, efisɛ onipa yi [Yesu] yɛ nsɛnkyerɛnne bebree?” (Yohane 11:47) Nnipa pii kɔhwɛɛ ɔbarima a na wɔanyan no no. Ɛno nti, wɔn mu pii gyee Yesu dii. Wohuu Lasaro sɛ adanse ankasa a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn na ɔsomaa Yesu. Ná adanse yi mu yɛ den araa ma Yudafo nyamesom akannifo a wɔn koma yɛ den no mu bi bɔɔ pɔw sɛ wobekum Yesu ne Lasaro nyinaa.—Yohane 11:53; 12:9-11.
Ɔsomafo Petro nyanee Kristoni bea Dorka.—Asomafo Nnwuma 9:36-42
13 So ɛfata sɛ yebegye atom sɛ owusɔre yɛ nokwasɛm? Yiw, efisɛ Yesu kae sɛ bere bi bɛba a wobenyan “wɔn a wɔwɔ nkae ada mu nyinaa.” (Yohane 5:28) Yehowa na Ɔbɔɔ nneɛma a nkwa wom nyinaa. So ɛsɛ sɛ ɛyɛ den sɛ yebegye adi sɛ obetumi asan abɔ nkwa bio? Nokwarem no, ebegyina Yehowa tumi a ɔde kae ade so titiriw. So obetumi akae yɛn adɔfo a wɔawuwu no? Nsoromma ɔpepepem huhaa na ɛwɔ yɛn amansan yi mu, nanso Onyankopɔn toto wɔn mu biara din! (Yesaia 40:26) Enti, Yehowa Nyankopɔn betumi akae yɛn adɔfo a wɔawuwu no ho nsɛm nyinaa, na wayɛ krado sɛ ɔbɛsan de wɔn aba nkwa mu bio.
14 Nanso, Yehowa te nka dɛn wɔ awufo a obenyan wɔn no ho? Bible kyerɛkyerɛ sɛ ɔpɛ ankasa sɛ obenyan awufo. Ɔbarima nokwafo Hiob bisae sɛ: “Sɛ onipa wu a, so ɔbɛtra ase bio?” Ɔdamoa mu a na Hiob bɛda atwɛn akosi sɛ bere bɛso ma Onyankopɔn akae no no ho asɛm na na ɔreka. Ɔka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “Anka wobɛfrɛ, na me nso magye wo so, anka w’ani begyina wo nsa ano adwuma no.”—Hiob 14:13-15.
15 Wode susuw ho hwɛ! Yehowa pɛ ankasa sɛ obenyan awufo aba nkwa mu bio. So ɛnyɛ anigye sɛ wubehu sɛ Yehowa te nka saa? Nanso, owusɔre a ɛbɛba daakye yi bɛyɛ dɛn? Henanom na wobenyan wɔn, na wobenyan wɔn akɔ he?
“WƆN A WƆWƆ NKAE ADA MU NYINAA”
16 Owusɔre ho asɛm a ɛwɔ Bible mu no ma yetumi hu owusɔre a ɛreba no ho nsɛm pii. Nnipa a wonyanee wɔn wɔ asase so ha no san ne wɔn adɔfo kɔtrae. Owusɔre a ɛbɛba daakye no bɛyɛ saa ara, na ɛbɛyɛ papa asen ɛno mpo. Sɛnea yehui wɔ Ti 3 no, Onyankopɔn abɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ asase nyinaa paradise. Enti wɔrennyan awufo mma wiase a akodi, nsɛmmɔnedi, ne yare ayɛ no ma mu. Wobenya hokwan atra asase yi so daa wɔ asomdwoe ne anigye mu.
17 Henanom na wobenyan wɔn? Yesu kae sɛ “wɔn a wɔwɔ nkae ada mu nyinaa bɛte [Yesu] nne na wɔafi adi.” (Yohane 5:28, 29) Saa ara na Adiyisɛm 20:13 ka sɛ: “Ɛpo yii emu awufo mae, na owu ne Hades yii emu awufo mae.” “Hades” yɛ nnipa damoa. (Hwɛ Nkekaho no.) Ɔdamoa yi bɛda mpan. Nnipa ɔpepepem pii a wɔregye wɔn ahome wɔ hɔ no bɛtra ase bio. Ɔsomafo Paulo kae sɛ: “Bere bi bɛba a wɔn a wɔteɛ ne wɔn a wɔnteɛ bɛsɔre afi owu mu.” (Asomafo Nnwuma 24:15) Ɛno kyerɛ dɛn?
18 “Wɔn a wɔteɛ” no bi ne nnipa pii a wɔtraa ase ansa na Yesu reba asase so a yɛkenkan wɔn ho nsɛm wɔ Bible mu no. Wɔn mu bi ne Noa, Abraham, Sara, Mose, Rut, Ester, ne afoforo pii. Wɔaka saa mmarima ne mmea gyidifo yi mu bi ho asɛm wɔ Hebrifo ti 11. Yehowa asomfo a wɔawuwu wɔ yɛn bere yi so nso ka “wɔn a wɔteɛ” no ho. Esiane owusɔre ho anidaso nti, yebetumi ade yɛn ho afi owu ho suro biara ho.—Hebrifo 2:15.
Wɔ Paradise no, awufo bɛsɔre na wɔne wɔn adɔfo asan akɔtra
19 Na nnipa a wɔansom Yehowa anaasɛ wɔanyɛ osetie amma no esiane sɛ wɔante ne ho asɛm da no nyinaa nso ɛ? Yehowa werɛ remfi saa nnipa ɔpepepem pii a “wɔnteɛ” no. Wobenyan wɔn nso, na wɔama wɔn bere a wɔde besua nokware Nyankopɔn no ho ade na wɔasom no. Wobenyan awufo wɔ mfirihyia apem no mu ma wɔama wɔne nnipa a wodii nokware no abɛtra asase so asom Yehowa. Ɛbɛyɛ anigye bere ankasa. Saa bere yi na Bible frɛ no Atemmu Da no.#
20 So eyi kyerɛ sɛ wobenyan onipa biara a watra ase pɛn? Dabi. Bible ka sɛ awufo no bi wɔ “Gehenna.” (Luka 12:5) Gehenna nyaa ne din no fii sumina bi a na ɛwɔ tete Yerusalem kurow no akyi no mu. Afunu ne nwura na na wɔhyew wɔ hɔ. Ná Yudafo no bu nnipa a wɔtow wɔn afunu gu hɔ no sɛ nkurɔfo a wɔmfata sɛ wosie wɔn na wonya owusɔre. Enti Gehenna yɛ daa ɔsɛe ho sɛnkyerɛnne a ɛfata. Ɛwom sɛ Yesu benya kyɛfa bi wɔ ateasefo ne awufo a wobebu wɔn atɛn no mu de, nanso Yehowa ne ɔtemmufo kɛse no. (Asomafo Nnwuma 10:42) Ɔrennyan wɔn a obu wɔn sɛ wɔyɛ abɔnefo na wɔmpɛ sɛ wɔsakra no.
WƆN A WONYA OWUSƆRE KƆ SORO
21 Bible ka owusɔre foforo bi a ebinom benya akɔ soro sɛ honhom abɔde nso ho asɛm. Owusɔre yi ho nhwɛso biako pɛ na wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Bible mu, Yesu Kristo de no.
22 Bere a wokum Yesu sɛ onipa no, Yehowa amma Ne Ba nokwafo no anka ɔdamoa mu. (Dwom 16:10; Asomafo Nnwuma 13:34, 35) Onyankopɔn nyanee Yesu, nanso wannyan no sɛ onipa a ɔwɔ honam ne mogya. Ɔsomafo Petro kyerɛkyerɛɛ mu sɛ ‘wokum Kristo honam mu nanso wɔma ɔtraa ase honhom mu.’ (1 Petro 3:18) Na eyi yɛ anwonwade kɛse ampa. Yesu baa nkwa mu bio sɛ honhom abɔde a ɔwɔ tumi! (1 Korintofo 15:3-6) Yesu ne obi a odi kan koraa a onyaa owusɔre a anuonyam wom yi. (Yohane 3:13) Afoforo nso benya saa owusɔre yi bi.
23 Bere a na Yesu nim sɛ ɛrenkyɛ ɔbɛsan akɔ soro no, ɔka kyerɛɛ n’akyidifo anokwafo no sɛ ‘ɔrekosiesie baabi’ ama wɔn wɔ hɔ. (Yohane 14:2) Yesu frɛɛ wɔn a wɔbɛkɔ soro no sɛ “kuw ketewa.” (Luka 12:32) Nnipa baahe na wɔwɔ Kristofo anokwafo kuw ketewa yi mu? Sɛnea Adiyisɛm 14:1 kyerɛ no, ɔsomafo Yohane kae sɛ: “Mihui, na hwɛ! Oguammaa no [Yesu Kristo] gyina Sion Bepɔw so, na mpem ɔha aduanan anan a wɔakyerɛw ne din ne N’agya din wɔ wɔn moma so no ka ne ho.”
24 Wonyan saa Kristofo 144,000 yi a Yesu asomafo anokwafo no ka ho no ma wɔkɔtra soro. Bere bɛn na wonya wɔn wusɔre no? Ɔsomafo Paulo kyerɛwee sɛ ɛbɛba wɔ Kristo mmae no mu. (1 Korintofo 15:23) Sɛnea wubehu wɔ Ti 9 no, yɛte saa bere no mu mprempren. Enti sɛ saa 144,000 no mufo kakra a aka no mu bi wu wɔ yɛn bere yi so a, wonyan wɔn amonom hɔ ara ma wɔkɔtra soro. (1 Korintofo 15:51-55) Nanso, nnipa mu fã kɛse no ara na wɔhwɛ kwan sɛ wobenyan wɔn daakye ma wɔabɛtra Paradise mu wɔ asase so.
25 Yiw, Yehowa bedi yɛn tamfo a ɔne owu so nkonim ankasa, na wobeyi no afi hɔ koraa! (Yesaia 25:8) Nanso, ebia wubebisa sɛ, ‘Dɛn na wɔn a wobenyan wɔn ma wɔakɔ soro no bɛyɛ wɔ hɔ?’ Wɔbɛyɛ ɔsoro Ahenni bi a emu yɛ anigye mufo. Yebesua saa nniso no ho ade pii wɔ ti a edi hɔ no mu.
Owusɔre ho nsɛm a ɛwɔ Bible mu no ma yenya anidaso a emu yɛ den.—Yohane 11:39-44.
Yehowa pɛ ankasa sɛ ɔde awufo bɛsan aba nkwa mu bio.—Hiob 14:13-15.
Wobenyan wɔn a wɔwɔ nnipa damoa mu no.—Yohane 5:28, 29.
* Kyerɛwtohɔ afoforo wɔ 1 Ahene 17:17-24; 2 Ahene 4:32-37; 13:20, 21; Mateo 28:5-7; Luka 7:11-17; 8:40-56; Asomafo Nnwuma 9:36-42; ne 20:7-12.
# Sɛ wopɛ Atemmu Da ne nea wobegyina so abu atɛn ho nsɛm pii a, hwɛ Nkekaho no.
Adesua no ho Nsɛmmisa
1-3. Ɔtamfo bɛn na ɔtaa yɛn nyinaa so, na dɛn nti na nea Bible kyerɛkyerɛ a yebesusuw ho no bɛma yɛanya abotɔyam kakra?
4. (a) Dɛn nti na nea Yesu yɛe no ma yehu sɛnea Yehowa te nka wɔ owu ho? (b) Nnamfo pa bɛn na Yesu nyae?
5, 6. (a) Yesu yɛɛ n’ade dɛn bere a na ɔne Lasaro abusuafo ne wɔn nnamfonom a wɔredi awerɛhow wɔ hɔ no? (b) Dɛn nti na awerɛhow a Yesu dii no hyɛ yɛn nkuran?
7, 8. Dɛn nti na ɛbɛyɛ sɛ na Lasaro asɛm no ayɛ sɛ nea anidaso biara nnim wɔ nnipa a na wɔwɔ hɔ no ani so, nanso dɛn na Yesu yɛe?
9, 10. (a) Ɔkwan bɛn so na Yesu kyerɛɛ ne tumi a ɔde nyanee Lasaro no Fibea? (b) Owusɔre ho nsɛm a ɛwɔ Bible mu a yɛbɛkenkan no so mfaso ahorow no bi ne dɛn?
11. Ɔkwan bɛn so na Lasaro wusɔre ho kyerɛwtohɔ no boa si nokware a Ɔsɛnkafo 9:5 yɛ no so dua?
12. Dɛn nti na yebetumi agye adi sɛ Lasaro wusɔre no sii ankasa?
13. Dɛn na yebetumi agyina so agye adi sɛ Yehowa betumi anyan awufo ankasa?
14, 15. Sɛnea Hiob asɛm no da no adi no, Yehowa te nka dɛn wɔ awufo a ɔbɛsan de wɔn aba nkwa mu bio no ho?
16. Tebea horow bɛn na wobenyan awufo ma wɔabɛtra mu?
17. Nnipa dodow ahe na wobenyan wɔn?
18. “Wɔn a wɔteɛ” a wobenyan wɔn no mu bi ne henanom, na ɔkwan bɛn so na saa anidaso yi betumi aka w’ankasa?
19. Henanom ne “wɔn a wɔnteɛ” no, na hokwan bɛn na Yehowa befi ayamye mu ama wɔanya?
20. Dɛn ne Gehenna, na henanom na wɔkɔ hɔ?
21, 22. (a) Owusɔre foforo bɛn na ɛwɔ hɔ? (b) Hena ne obi a wodii kan nyanee no ma ɔtraa ase honhom mu?
23, 24. Henanom na wɔbom yɛ “kuw ketewa” a Yesu kaa wɔn ho asɛm no, na wɔn dodow bɛyɛ ahe?
25. Dɛn na yebesusuw ho wɔ ti a edi hɔ no mu?